umatshini wokupakisha ozenzekelayo we-pellet onobunzima bokuzenzekelayo kunye nokuthunga
Amandla:0.37kw + 0.37kw
Umthamo:400~ 800bag / h
Isetyenziselwe:ukupakisha ingqolowa ,ukupakisha kwepellet,ivale granular
Umsebenzi:zenzekelayo ngokuzenzekelayo,ukutywinwa nokuthuthwa
umatshini wokupakisha ozenzekelayo wokuhambisa ukutya ngumatshini omtsha wokupakisha ophuhlisiweyo,yamkela inkqubo ezenzekelayo yekhompyuter & ulawulo lwetekhnoloji. Isetyenziselwa ubunzima kunye nokupakisha iipellets zokutya ngaphakathi umgca wokutya kwepellet ukusindisa abasebenzi. Ngokuqhelekileyo, umatshini wokupakisha ozenzekelayo wokupakisha uhlala uhlanganiswa nebhanti yezothutho kunye nomatshini wokuthunga ,enokwenza inkqubo yokuzenzekelayo yeepellet yokulinganisa kunye neenkqubo zokupakisha ezisetyenziswa kwimizi-mveliso yokutya yezilwanyana.
Ukusetyenziswa koMatshini oPakisha ukuPakisha okuZenzekelayo
Umatshini wokupakisha othwala ubunzima bepellet kufanelekile kwizityalo ezikhulu kunye neziphakathi zokuveliswa kwemveliso yepellet. umatshini wokupakisha i-pellet uhlala uhlala ufakwa kwinkqubo yokufaka ubunzima kunye nokuzilayisha, zidityaniswe nomatshini wothutho kunye nomatshini wokuthunga. Umatshini wokupakisha ozenzekelayo wokuhambisa ukutya onobunzima bokusebenza unesicelo esibanzi ,njengepellets zokutya, iipellethi zokhuni, amabele,izichumisi zesichumiso kunye nezinye izinto eziyinxalenye kunye nezinto zomgubo kunye nokufuma. Ngomsebenzi ogqwesileyo, yamkelwe ziifektri ezinkulu zemveliso yokutya ephambili.
Iimpawu zoMatshini wokuLungisa ukuPakisha ukuZalisa uXabiso
1.Umatshini wokupakisha ukutya onobunzima bokupakisha ugcina unxibelelwano, umatshini wonke unokuphumeza uqhagamshelo lwedijithali kunye nomatshini ophezulu kumgca wokuvelisa i-pellet feed.
2.Umatshini wokupakisha we-pellet oluzenzekelayo unezibonelelo zokubala ngokuchanekileyo, umsebenzi ozinzileyo, umboniso wedijithali kunye nokusebenza okulula.
3.Ukuxhobisa isoftware yolawulo ekhompyuter, umatshini wokufunxa ukutya okondla ubunzima kunye nomatshini wokupakisha uyafumaneka kulawulo lwedatha,ukulahla ukuphakama okuzenzekelayo, ukufunyanwa okuzenzekelayo.
4.Ukwamkelwa kwenkqubo yokusebenza nzima. Ezi zimbini ubunzima zinokusebenza ngokuvumelanayo okanye umntu ngamnye, ophucula ukusebenza kakuhle komatshini wokulinganisa ukutya kunye nomatshini wokupakisha.
5.Sebenzisa inzwa yokuqhubela phambili yamazwe aphesheya kunye ne-pneumaticatorsators, umatshini wokutya onobunzima kunye nomatshini wokupakisha usebenza ngokuthembekileyo, ngaphandle kokungcola.
6.Umphezulu wangaphandle usebenza ubuchwephesha bokutshiza ngeplastiksi ngaphandle kwangaphakathi bufaka izinto zentsimbi engaginyisi mathe, ngokuchasene nokugqwala kunye nokudumba, oko ke kukwenza ukuba ubomi bomatshini buqhubeke.
Iiparamitha zomatshini ezipakisha ezizenzekelayo
Umzekelo Uluhlu lobunzima Ukupakisha umthamo Ukupakisha ukuchaneka Ubungakanani
VTDCS25 5-25IKG 500-900iingxowa / hr ± 0.2-0.5% 720X630X2600mm
VTDCS50 25-50IKG 400-800iingxowa / hr